Mpikatroka Mafana Fo Tsy Mpitondra Fivavahana Nokendrena Ary Novonoina Tany Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2016 11:47 GMT
Mpikatroka tsy mpitondra fivavahana, Nazimuddin Samad. Sary tao amin'ny pejy Facebook-ny
Mpianatra amin'ny taranja lalàna, 28 taona, novonoina mpamono olona telo tany Dhaka, Bangladesh, ny 7 Aprily 2016. Toa ireo tsikerany amin'ny fivavahana mitàna ny nentin-drazana no tena nikendrena ilay tovolahy.
Ny alarobia alina nanodidina ny tamin'ny 9 ora, nandeha an-tongotra nody tany an-tranony niaraka tamin'ny namany teny amin'ny Làlana Hrishikesh Das ao Laksmibazar, faritry Dhaka i Nazimuddin Samad. Nanatona tamin'ny moto ireo lehilahy telo, namoaka antsibe. Taorian'ny fifandonana nanoloana olona maro, niafina izy ireo ary nitifitra nahafaty azy. Nihiaka “Allahu Akbar” (Andriamanitra no lehibe indrindra) ireo mpamono, nialoha ny nanaovany famonoana. Nitsoaka ny toerana izy ireo avy eo ary mbola mila fantarina. Hatramin'ny 8 Aprily, tsy nisy olona nilaza ampahibemaso ho tomponandraikitra tamin'ny famonoana.
Mpianatra lalàna tao amin'ny Anjerimanontolo Jagannath i Nazimuddin Samad, ary feo mpitsikera ireo fivavahana mahery fihetsika. Mandary anjara amin'ny adihevitra amin'ny Aterineto, matetika amin'ny Facebook, nanao asanà mpandrindra tao amin'ny Ganajagaran Mancha i Samad, ilay vondrona izay nitaky ny rariny tamin'ireo heloka an'ady ny taona 1971, ary ny fandraràna ireo politika ara-pivavahana ao amin'ny firenena. Araka ny Guardian, nipetraka tany avaratra atsinanan'ny tanànan'i Sylhet izy, na any Londona aza ny ankamaroan'ireo mpikambana amin'ny fianakaviany. Noho ny fianarany, nifindra tany Dhaka izy roa volana lasa izay.
Nanjohy ny lisitry ny mpitoraka bilaogy izay mitombo hatrany namoy ny ainy tamin'ny famonoana mitovitovy tamin'izany ihany koa izy, novonoina noho ireo fomba fijeriny liam-pivoarana sy tsy olon'ny fivavahana. Nisambotra olona maromaro tamin'ny fotoana tsy mitovy ireo polisy, tafiditra tamin'izany ireo mpikambana ao amin'ilay vondrona voaràra antsoina hoe Ekipa Ansarullah Bangla, noho ireo famonoana ireo. Ny volana Desambra 2015, olona roa no nohelohina sy nosaziana mandrapahafaty noho ilay famonoana ilay mpitoraka bilaogy Ahmed Rajib Haiderr ny taona 2013, izay novonoina ho faty teny an-dàlana tamin'ny fotoana nampafàna ireo fihetsiketsehana tao amin'ny Kianja Shahbag. Tsy nisy olona nohenjehina kosa noho ny famonoana ireo lehilahy enina hafa, izay samy nokendrena noho ny fizaràna ireo fotokevitra ara-politika ireo.
Taminà tafatafa niaraka tamin'ny BBC ny 8 Aprily 2016, nilaza izao ny Minisitry ny Atitany, Asaduzzaman Khan: “Tsy afaka lazaiko izao dia izao hoe nahoana io no niseho na hoe ahoana ny fomba nisehoany. Mila fantariko aloha…..mila mijery ao amin'ny biloaginy izahay ahitàna hoe misy zavatra mahatohintohina ve ao.”
Raha nanontaniana hoe ara-drariny ve izany ilay famonoana raha nisy votoaty manohintohina ao amin'ny bilaogin'i Nazimuddin, namaly izao izy: “Tsy te-hahita an'izany aho. Raha jerenareo ao anatin'ny bilaogin'ireo novonoina tato ho ato, nanakiana fivavahana toy izany, nanakiana ny finoan'ny olona, tsy azo ekena na aiza na aiza maneran-tany izany.”
Mpandray anjara navitrika tamin'ireo hetsika tao amin'ny Kianja Shahbag ny taona 2013 i Nazimuddin, izay Bangla aman'hetsiny no nanao fihetsiketsehana nanohitra ny tsimatimanota iainan'ireo mpanao heloka an'ady. Tamin'ny faratampon'ny hetsika, izay ny maro nokarakaraina tamin'ny Aterineto, namorona kaomity misy mpikambana sivy ny governemanta mba hikaroka ireo mpitoraka bilaogy sy mpampiasa Facebook manao tsikera mivoana mikasika ny Silamo sy ny Mpaminany Mahomet. Ny 31 Martsa, nametraka ny lisitr'ireo mpitoraka bilaogy 84 sy mpikatroka mafana fo amin'ny Aterineto tao amin'ilay kaomity namboarin'ny Minisitry ny Atitany ireo mpisolo tena ireo mpitondra fivavahana Silamo tsy azo idohifana, niampanga ireo mpitoraka bilaogy ho tsy mino an'Andriamanitra ary nanoratra zavatra nanohitra ny fivavahana Silamo. Laharana faha-13 tao amin'io lisitra io ny anaran'i Nazimuddin.
Nisy sokajy roa io lisitra io: mpitoraka bilaogy sy olona tsy ao anatin'ny fivavahana ary ireo tsy mino mihitsy, nosokajian'ireo mahery fihetsika sy mitàna fotokevitra ho fahavalon'ny fivavahana Silamo, ary ireo mpitarika ilay sahy miteny malalaka, Ganajagaran Mancha, vondrona mitaky ny rariny momba ireo heloka an'ady, izay anisan'izy ireo i Nazimuddin.
Naneho hevitra navitrika tao amin'ny Facebook i Nazimuddin. Ny volana Aogositra 2015, fony nisy namono ilay mpitoraka bilaogy Niloy Neel, nandefa fanehoankevitra tezitra maromaro tao amin'ny Facebook i Nazimuddin, ary avy eo narahan'ireo Silamo maso taty aoriana. Nananihany izao izy:
Iza no niteny anareo ho tonga eto amin'ny rindrin'ny Facebook-ko ary hamaky ny zavatra nosoratako? Nanery anareo hamaky ny zavatra nosoratako ve aho? Nanome toerana ahy hilaza ny tiako tenenina ny Facebook. Ny eritreritra sy fihetsehampo izay mandalo ato an-tsaiko, hozaraiko eto izy ireo. Tsy nisy nilaza anareo ho tonga ato ary hamaky azy ireny.
Ka nahoana ianareo no mamono olona amin'ny antsibe?
Nijanona tsy nanoratra tao amin'ny Facebook intsony izy taorian'ny naneren'ny fianakaviany azy. Nanoratra izao tao amin'ny lahatsoratra izy ny 8 Aogositra 2015:
Tsy hanoratrra na inona na inona intsony aho. Tsy ho eto intsony. Mijanona ao amin'io afobe io ianareo. Afaka may ao amin'ny afo milelalela ianareo ary tsy hiteny na inona na inona intsony aho. Tsy hanoratra na inona na inona. Tsy misy fanomezana lanja ny aina eto. Na ireo mahery fihetsika feno herisetra, na ny governemanta mba efa mivoatra, tsy misy manome lanja ny aintsika.
Niverina tamin'ny Facebook izy ny taona manaraka. Ny 22 Janoary 2016, nanoratra izao izy:
Lasa mahery fitsehika ireo te-hanaraka 100 isan-jato ireo voasoratry ny fivavahana. Lasa mpivavaka eo ho eo ireo manaraka ny fivavahana fa kosa tsy manaraka tanteraka ireo fomba fanao (tranainy). Ao anatin'ny fikorontanana ireo olona eo ho eo ireo, kazarana tsy fifandrifiana tanteraka. Tazonin'izy ireo ho velona ny fivavahana, amin'ny fanagiazana ireo mahery fihetsika sy fitazonana azy ireny ho lavitry ny fomba fivavahana. Raha tsy eo izy ireo, azo lazaina ho fahavalon'ny maha-olona sy ny fahalemana ireo fivavahana.
Tato anatin'ireo andro vitsivitsy, nanohana fanangonantsonia hanalàna ny Silamo tsy ho fivavaham-panjakan'i Bangladesh izy, ary nahazo fandrahonana maro tao amin'ny Facebook avy eo. Namaly fanehoankevitra mpampianatra iray i Nazimuddin, izay nilaza taminy hitandrina tsara satria manahy ny mety hanafihana azy ny olona:
Matahotra ny amin'ny aina ihany koa aho ramose. Tahotra ny ho faty tanora. Saingy inona no hatao, ramose. Mety tsaratsara kokoa io fahafatesana io noho ny hoe hangina hanondrika loha fotsiny.
Taorian'ny fahafatesany, nomarihan'ny Facebook hoe “Fahatsiarovana an'i Nazimuddin Samad” ny kaontiny. Kanefa, mazava ho azy fa maro ireo mpanaraka ny fivavahana Silamo no mbola mikendry ny kaontiny hatrany. Nanoratra izao ny mpaneho hevitra iray Dulal Zahish:
Raha ny fanaovana fanehoankevitra feno adalana mikasika ny fivavahana no atao hoe fahalalahana miteny ho an'ireo tsy mpino, nahoana àry no tsy fahalalahana hihetsika ho an'ireo mitàna ny fotokevitra hatrizay kosa ny fampiasàna antsibe mba hamelezana ireo tsy mpino?
Miaraka amin'io tsy fandeferana sy fanenjehana tsy mitsahatra mitomba atao an'ireo tsy mpino io, misy ve fomba hanajanonana ireny famonoana ireny? Hoy ilay Bangla mpanao gazety miaina an-tsesitany, Tasneem Khalil, izay efa niasa tao amin'ny The Daily Star sy CNN teo aloha, ary efa nanolo-tena ho fakàn-kevitry ny Human Rights Watch ihany koa, raha niteny tamin'ireo mpikatroka mafana fo mpiaro ny zon'olombelona, Maryam Namazie sy Fariborz Pooya, tao aminà tafatafa tamin'ny Aterineto mikasika ny famonoana ireo mpitoraka bilaogy tsy anatin'ny fivavahana.
Manazava i Khalil fa misy hetsika mitombo hatrany ataon'ireo mpieritreritra malalaka izay manoratra miaraka ao amin'ny bilaogy Mikto Mona, an'i Avijit Roy, ilay mpitoraka bilaogy nisy namono. Ny sasany tamin'izy ireo dia lasibatra noho ireo famonoana nataon'ireo mpanaraka ny Anwar al-Awlaki. Manaraka io fotokevitra io ireo nikotrika ireo fanafihana tany Parisy. Matahotra izy hoe tsy ato ho ato ireo no hitsahatra.
Nanoratra tao amin'ny matoan-dahatsoratra ho an'ny The Daily Star i Adit Hasan Khan, hoe mendrika ifantohana bebe kokoa noho ireo fanatanjahantena sy ireo lahatsary malaza amin'ny Aterineto ny heloka mahery setra sy ny fivavahana mahery fihetsika, tamin'ny fanaingàna ny vahoaka hitaky ny fandraisana andraikitra sy ny rariny amin'ireo fanadihadiana an'ireny famonoana ireny.